Current Oromia issues, especial about systematic Genocidal issues-ONN – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsCurrent Oromia issues, especial about systematic Genocidal issues-ONN
Current Oromia issues, especial about systematic Genocidal issues-ONN
Dr Tesso wajjiin wayee yeroo amma kana ilaalchise mari’anna. Keesattu wayee zarii duguuggina ilaalchisee waliin mari’anna.
We discuss about current Oromia issues, especial about systematic Genocidal issues
Ministriin Dhimma Alaa Ameerikaa Ministeerota Afriikaa Mariisisuuf Jedha
Doonaald Yamaamotoo, Ministrii dhimma alaa US – tti gargaaraa ministeerri dhimmootii Afriikaa
WAASHINGITAN, DIISII — (VOAAFAANOROMOO) —Ministriin dhimma alaa US Rex Tillerson ministeerota dhimmootii alaa biyyootii Afriikaa 37 torban kana simatanii waliin mari’achuuf jiru. mariin isaaniis bulchiinsa prezidaant Doonaald Traampiin kan geggeeffamu wal ga’ii imaammata Afriikaa irratti fuuleffate isa guddicha ta’uun beekamee jira
Wal ga’iin kamisa fi jimaata dhufu geggeessamu kun daldala, dinagdee, farra shororkeessummaa fi bulchiisa gaarii kan of keessatti hammatu ta’uun beekameera.
Wal ga’ii kana irratti ministeerota kanaan ala dura taa’aan gamtaa Afriikaa Mossa Faki Mahamat fi jiloonni gamtaa Afriikaa kanneen biroon irratti argamu jedhameera.
Ministrii dhimma alaa UStti gargaaraa ministeerri dhimmootii Afriikaa Doonaald Yamaamotoo VOA Africa 54 jedhamuuf ibsa kennaniin galmi wal ga’ii isanaa inni ijoon gargaarsa kennamu irra tarii dantaa waliinii irratti kan hundaa’I imaammata michummaa qopheessuu akka ta’e dubbataniiru.
Akkuma argitan jedhan Yamaamotoon qiyyaafati US Afriikaa qofaa irratti utuu hin mutaa’in guutummaa addunyaa irratti waan ta’eef mariin jirus damee bal’aa qaba. Gargaarsa namoomaa qofaas utuu hin ta’in misoomas of keessaa qaba.
Guddinni dinagdee walii galaa akka jiraatutti yaaaduu dhaanis dandeettii ijaaruu irrattis ni fuulleffanna jechuu dhaan ministrichi dhimmootii Afriikaa Yamaamotoon dubbataniiru.
– Sadaasa 14,2017) Lola kaayyoo Wayyaanee kan farra Bilisummaa Ummatootaa, farra dimokiraasii fi haqaa tahe fiixaan baasuuf bara 1992 Wayyaaneedhaan Ummata Oromoo irratti banamee waggoota 25 dabraniif osoo addaan hin citin deemaa jirutu Wayyaanee butuchee sadarkaa amma irra gahe kana (jal-bultii xumura aangoo isaa) irraan gahe. Haa tahu malee, Wayyaaneen har’as osoo shakaraata ykn. wargamsuu du’aa keessa jiruu illee lola Ummata Oromoo irratti labse kana injifachuuf abjoota. Abjuun isaa kun garuu abjuu tahee hafa. Ummatni jaalalaan malee lolaan hin mohatamu. Addi Bilisummaa Oromoos onnee Ummata Oromoo keessa kan seene lolaan osoo hin taane jaalalaani. Biyyoota sirna dimokiraatawaadhaan bulan keessatti mootummaatu tajaajiltuu Ummataa ti. Ol’aantummaan kan Ummataa ti.
Sirna/system fi Heera ol’aantummaa Ummataa kabajsiisuun waan hojjetamuuf hariiroo Ummataa fi mootummaa biyya bulchu gidduu jiraachuu qabu isatu murteessa. Waan taheef yoo mootummaan fedhii Ummata isa filatee sana guutuu hanqate ykn. galfata/amaanaa nyaate (yoo dantaa fi mirgi Ummataa tuqame) Ummatni sirnaa fi Heera sanatti dhimma bahee of irraa jijjiira.